Saynisyahanad Talyaani oo geeriyootay - BBC Somali - Warar
Saynisyahanad Talyaani oo geeriyootay
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 31 December, 2012, 00:20 GMT 03:20 SGA
Rita Levi-Moltalcini oo geeriyootay 103 sanno jir.
i, waxay ka dhalatay qoys aqoonyahan iyo fanaan Yuhuud ah sanadkii 1909. Waxay ka qalin jebisay jaamacad caafimaadka oo ku taal magaalada Turino ee dalka Talyaaniga, waxayna shaqo ku gashay aqoontii ay soo baratay.
Hase ahaatee shaqadeedii waxay markiiba isku dhaceen sharciyo ka soo horjeeda dadka Yuhuudda ah oo la soo saaray waqtigii uu Talyaaniga xukumayay hoggaamiyihii Fashiistaha ee Benito Mussolini. Sharciyadaasi waxay ku khasbeen dadka Yuhuudda ah inay dibadda ka ahaadaan oo aysan ku shaqeyn karin aqoon iyo xirfad sare toona.
Laakiin Rita Levi-Montalcini waxaa u suurta gashay inay sii waddo inay tijaabooyin cilmi ah oo gurigeeda ay ku dhex samayso iyadoo adeegsanaysa shaybaar macmal ah. Markii dagaalku hareeraheeda ka qarxay waxay sii wadatay inay daraasad ku sameyso xididdada nerve-yaasha ee uur ku jirka digaagga.
Rita Levi-Montalcin waxay ahayd sidoo kale heesaa
Markii nabaddu imaanaysay, waxay cilmibaaristeeda ka sii wadday jaamacad ku taal waddanka Maraykanka. Halkaas waxay daboolka ka qaadday oo ay soo bandhigtay waxyaabo iftiimiyay in la fahmo garasho la'aantii unugyada sida aan caadiga ahayn u samaysma ee bani'aadamka. Waxaana muhiimadda shaqadeeda la aqoonsaday sanadkii 1986-kii, markaas oo wax laga siiyay abaalgudka Nobel ee cilmiga daawada lagu bixiyay.
Waqti dambe, dalka Talyaaniga gudihiisa, Rita Montalcini waxaa laga dhigay Senator joogto ah, sharaftaas oo dalka Talyaaniga laga siiyo siyaasiyiinta ugu caansan, fannaaniinta iyo saynisyahannada.